Ra'iisul Wasaare Kheyre oo kormeer ku tagay xarunta maamulka gobolka Banaadir - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta dowladda hoos ee xamar.
Xassan Cali Kheyre ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Banaadir oo uu horkacayo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow.
Kulankan ayaa looga hadlay, sugidda amniga caasimadda, dardar gelinta adeegyada bulshada iyo hirgelinta qorshaha horumarinta caasimadda.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha Soomaaliya uu kula dardaarmay in maamulka gobolka uu dardar geliyo sugidda amniga caasimadda.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku dhiiri geliyay dardargelinta dadaallada sugidda amniga caasimadda, fududeynta iyo hirgelinta adeegyada bulshada iyo dowlad wanaagga.
“Maanta waxaan kormeer ku tagay xarunta Maamulka gobalka Banaadir waxaan ku dhiirri geliyay dardar-gelinta dadaallada lagu sugayo amniga caasimadda, fududaynta iyo hir-gelinta adeegyada ka qayb qaadanaya horumarinta dawlad wanaagga iyo bilicda caasimadda” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa maalmihii la soo dhaafay waday dadaallo uu ku hubinayo habsami u socodka howlaha iyo adeeyada ay bixiso dowladda.
Maamulka gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan qaramada midoobay oo ka wada hadlay dhowrista xaquuqul insaanka